मैले उनीहरू सबैलाई माफ गरिदिएँ ! - SatyaPatrika
मैले उनीहरू सबैलाई माफ गरिदिएँ !
२०७८ पुष ५, सोमबार प्रकाशित
मनमा कसैका लागि ठीक छ, ल मैले तिमीलाई माफ गरिदिएँ भन्ने वाक्य हुनु तर त्यो ठीक छु सुन्ने मान्छे नै नरहनु, ठीक हुन्न रहेछ।
२०६९ मेरा आँखाले पहिलोपल्ट मृत्यु देखेँ। आँखामा राखे पनि नबिझाउने साथी आँखैअगाडि ढल्यो। कक्षाकोठामै।
अघिल्लो दिन सरले भन्नुभएको थियो, ुभोलि सबैले घरमा यो पाठ पढेर आउने। अनि एक जनाले अगाडि गएर साथीहरूलाई पढाउने है त।ु
ऊ सधैं अगाडि जान खोज्ने मान्छे थिएन। तर त्यो दिन खै किन हो, यति सुन्दैमा दंग परिहाल्यो। को(को साथीलाई के(के सोध्ने, एक(एक प्रश्न तयार पारेर बसेको थियो।
भोलिपल्ट क्लास सुरू भयो। सर आउँदाआउँदै, ऊ आफैं, ुम पढाउँछु निु भन्दै उठ्यो। सरले मान्नुभयो। ऊ मार्कर र डस्टर बोकेर सेतो पाटीतिर गयो। अगाडि गइरहँदा उसको अनुहारको उज्यालोलाई उसले लगाएको सेतो सर्टको चमकले पनि छोप्न सकेन। हामी सबै, ुअब साथी पछाडि फर्केर पढाउँछ होलाु भन्दै पर्खिरहेका थियौं।
दुई सेकेन्ड चुप्प लाग्यो। सबैतिर हेर्‍यो। अनि बोल्यो, ुसर आई का।।।।न्ट।ु
तुरून्तै अस्पताल लग्यौं। साथी मुटुको बिरामी थियो, सबलाई थाहा थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि एक(दुईपटक ढलेको हो। ढलेर उठेको हो। हामी ढुक्क थियौं, साथी यसपालि पनि उठ्छ।
चारमा पढ्दादेखि तीन केटी जुकाजसरी टाँसिएका थिए। दसमा पुगेपछि एकाएक जुकामाथि नुन पर्‍यो। अलिअलि कुरा काट्दा काट्दै, ठ्याम्मै बोलचाल नै बन्द भयो। कसैले ुकिन रिसाएका हौरुु भनेर सोध्दा, सुनाउन सकिने केही कारण थिएन।
ुकेटाकेटीजस्तो के गरेको योरु जे(जे चित्त दुख्याछ भन्नू बरू। कुरा सुन्नू एकअर्काको, के ठुसठुस हो,ु गिज्यायो।
अनि सम्झायो, ुअब मिल, माफ गर्देऊ एकअर्कालाई।ु
त्यतिका धेरै साथीका अगाडि ुनाइँु भन्दै जिद्दी गर्न मिलेन। फेरि बच्चा जसरी लडे पनि आफूलाई बच्चा देखाउनु त थिएन। हामी मिल्यौं। कम्तीमा उसको अगाडि मिलेजस्तो गर्‍यौं।
तिमी जाँदा त मैले माफ गर्दै बोलाउन चाहेका साथीहरू मसँगै, मेरैअगाडि थिए। आज सोचेँ, यदि त्यो बेला मैले रिस साँधेको मान्छे उनीहरू नभएर तिमी भएको भएरु म आफूलाई कसरी माफ गर्थेँ होलारु
कुनै बेला माफ गरिदिऊँ कि, बोलाऊँ कि लाग्दा म आफैंलाई सम्झाएर भन्थेँ( रिसलाई पनि उसको भागको समय दिनुपर्छ। समय बितेपछि चित्त दुखाइ बिस्तारै धमिलिँदै जान्छ। अनि केही वर्षपछि त आफैं मेटिइहाल्छ नि।
तर आज सोचेँ, यदि यो रिस मर्ने समय नबित्दै म नै बितिगएँ भनेरु यी जोसँग रिसाएकी छु, उनीहरूको के हुन्छरु कोही मान्छे मरेर जाँदा पनि आफ्ना लागि मनभरि रिस बोकेर गयो भन्ने बोझ कति भारी हुन्छ होला१
आज तिमी गएको ९ वर्षपछि म फेरि तिमीले सिकाएकै पाठमा फर्किँदैछु। मलाई आजसम्म दुखाएका सबैसबैलाई माफी भयो।ु
गल्ती गर्नेले जानेर गर्‍यो या नजानेर, त्यो पछि जानौंला। ऊ अहिले पछुताउँछ कि गल्ती स्वीकारेकै छैन, त्यो पनि बुझौंला। कसैलाई सुधार्न बाँकी होला, सजाय बाँकी होला। कोही फर्केर आउला नआउला, सब सोचौंला। तर यी सबैभन्दा पहिले, गलतको गाह्रो भोगिरहेको आफ्नै मनलाई थपक्क बसाएर थपथपाउन जरूरी रहेछ। माफी त्यही थपथपाउन चाहिने ुन्यानो स्पर्शु रहेछ।
कतै कोही रिसाएको, कसैलाई गाली गरिरहेको मान्छे देख्नेबित्तिकै सबै सोच्छन्, ुऊ त रिसाइदियो, पुग्यो। सुन्नेलाई, सहनेलाई कति पीडा छ।ु
त्यसैले रिस सकिँदा, रिस सहिरहेको मान्छेभन्दा पनि बढी रिसाइरहेको मान्छेले मुक्ति पाउँछ। ुमाफीु त्यही मुक्तिको बाटो हो।
माफीले माफ गरिदिएको मान्छेसँग सम्बन्ध सुधार्छ भन्ने छैन। सुधार्न पनि पर्दैन। बस् यतिन्जेल मनमा थन्किबसेको रिसले आफूलाई बिगार्न चाहिँ छाडिदिन्छ। अब आफैंसँगको सम्बन्ध सुध्रिन सुरू हुन्छ। जिन्दगीमा त्यो रिस र रिसाएको मान्छेबाहेक अरू के(के छ, सब देखिन थाल्छ। सुन्दर देखिन थाल्छ।
मैले आज मलाई आजसम्म दुखाएका सबैसबैलाई माफ गरिदिएँ। मेरै लागि। – सेताेपाटी
कर्णालीमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सफा रहने
सुर्खेतमा एकैपरिवारका ३ जनालाई जटिल रोग, जीवन बचाउन हारगुहार